Daniel Defoe | Zvazvino Zvinyorwa
Daniel Defoe, akakurumbira wezana ramakore rechiXNUMX munyori wechiRungu uye mutori wenhau, akaberekwa rimwe zuva nanhasi kubva muna 1660. Munyori weanozivikanwa Robinson Crusoe, zvichibva nenyaya yechokwadi, akasainawo nyaya senge ari Kaputeni Singleton Adventures o Moll Flanders, iyo ingangodaro iri yekutanga huru yekudyidzana munharaunda mumabhuku echiChirungu, nezve hupenyu hwehure. Izvi ndizvo zvimwe zvimedu zvakasarudzwa yavo yekuyeuka.
1 Daniel Defoe - Kusarudzwa kwezvimedu
1.3 Dhayari yegore redenda
1.4 Kaputeni Singleton Adventures
1.5 Roxana kana munhu ane rombo rakanaka
Daniel Defoe - Kusarudzwa kwezvimedu
Pachikepe ndakawana zvinyoreso, ingi, uye bepa, uye ndakaita zvese zvandaigona kuti ndivachengete; inki yacho payakaramba iri ndakakwanisa kuchengeta chinyorwa chakanyatsojeka, asi payakapera ndakazviwana ndisisakwanise kuenderera nayo, sezvo ndaisakwanisa kugadzira inki kunyangwe zvese zvandakaedza. Izvi zvakauya kuzondiratidza kuti ndaida zvinhu zvakawanda kunze kweizvo zvandaive ndaunganidza. Sezvo ndakwanisa kujairira mweya wangu zvishoma kune zvawo zvazvino uye nekusiya tsika yekutarisa pagungwa kana ndikaona ngarava, ndakazvishandira kubva ipapo zvichienda pakuronga hupenyu hwangu uye ndichiita kuti hugadzikane sezvinobvira. Ndakagadzira tafura nechigaro.
Ichokwadi chaizvo kuti, kubva panguva yekutanga yandakatanga kuve nehukama naye, ndakanga ndakatsunga kumutendera kuti arare neni, kana akazvifungira kwandiri; asi zvaingove nekuda kwekuti ini ndaida rubatsiro rwavo uye ndaiziva hapana imwe nzira yekuzvisimbisa. Asi patakanga tiri pamwe chete husiku ihwohwo, uye, sezvandataura, takaenda kune zvakanyanyisa, ndakaona kusasimba kwechinzvimbo changu. Ini handina kukwanisa kuramba muyedzo uye ndakamutswa kumupa zvese asati akumbira. Uye zvakadaro aive akanaka kwandiri zvekuti haana kumbobata izvi kumeso kwangu, kana pane chero chiitiko haana kana kumboratidza kusafara nehunhu hwangu, asi aigara achipikisa kuti aigutsikana nekambani yangu seawa rekutanga isu taive tese, Ndiri kureva tese pamubhedha.
Asi, sekutaura kwandaive ndaita, pane zvese chimiro chezvinhu zvachinja zvakanyanya, kuzvidemba nekusuwa kwakapendwa pazviso zvese; uye kunyangwe dzimwe nharaunda dzakatadza kubatwa nedenda iri, munhu wese airatidzika kunge akanetseka zvakanyanya; Uye sekuona kwedu denda richifambira mberi zuva nezuva, munhu wese akazvifunga ivo nemhuri dzavo vari munjodzi huru. Dai zvaibvira kupa tsananguro yakatendeka yenguva idzodzo kune avo vasina kurarama, uye kupa muverengi zano chairo rekutyisa kwakapararira kwese kwese, zvaisazokundikana kuita fungidziro mupfungwa dzavo uye vazadze nekushamisika. Zvinogona kutaurwa zvakanaka kuti vese veLondon vaichema; Ichokwadi kuti mumigwagwa waisakwanisa kuona mbatya dzekuchema, nekuti hapana munhu, kunyangwe hama dzavo dzepedyo, aipfeka nhema kana kupfeka chero nguvo yainzi inochema; asi izwi rekurwadziwa rakanzwika kwese kwese.
Kaputeni Singleton Adventures
Ipo isu nevaNegro tichitsvaga zvekudya negoridhe, mupfuri wesirivheri akacheka manhamba mazhinji kubva kumatare ake esirivha nedare. Akanga atove nehunyanzvi uye akagadzira chaiyo mabasa ehunyanzvi, ayo aimiririra nzou, tiger, civet katsi, mhou, makondo, shiri, dehenya, hove, nezvose zvakapfuura nepfungwa dzake. Sirivheri nedare zvakange zvoda kupera, saka akatanga kushanda pane goridhe rakarohwa zvikuru.
Roxana kana munhu ane rombo rakanaka
Mushure mezvo, akaramba achidzoka kakati wandei zvine chekuita nemari yangu, sezvo zvaive zvakakodzera kutevedzera mamwe maratidziro kuti ndikwanise kuatora ndisina kukumbira kubvumidzwa nemuchinda nguva dzese. Ini ndanga ndisinganyatsonzwisisa ruzivo rwekuvhiya, izvo zvakatora anopfuura mwedzi miviri kuti zviitwe, asi, pachangogadziriswa zvese, mudiri akamira kuzondiona rimwe zuva masikati ndokundiudza kuti Hukuru hwake akaronga kundishanyira husiku, kunyangwe aida kugamuchirwa zvisingaite. Ndakagadzirira kwete chete makamuri angu, asi neniwo, uye ndikave nechokwadi chekuti pakusvika pakanga pasina munhu mumba kunze kwemudiri wake naAmy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Daniel Defoe. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Zvimwe zvidimbu